Waxqabdka 2005 | Somaliland Nordic Relief
Mashruucani waxa uu ka socday muddo lix bilood ah 2005-11-01 ilaa 2006-04-30 magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera, waxana ku baxday lacag dhan 156 000 kr oo markaa u dhigmaysay 20 000 $. Mashruucan waxa fuliyay ururka GAVO (General Assistance and Volunteers Organization) oo siminaaro dhawr ah ku qabtay Berbera iyo Hargeysa. Siminaarada waxa ka soo qaybgalay dhammaanba dhinacyada kala duwan ee bulshada. Mashruuca oo wacyigalin ahaa ayaa xoogga la saaray dhinaca dhallinyarada kuwaas oo aad uga soo qaybgalay siminaarada. Ujeedada laga lahaa siminaaradu waxay ahayd in la kordhiyo aqoonta dadka ka soo qaybgalaya si ay hadhow ugu faa´ iideeyaan bulshada ay u shaqeeyaan ugana digaan cudurkan halista ah. GAVO waxay sameeyeen oo kale wacyigalin iyagoo adeegsanaya idaacadaha iyo TV-yada. Waxa kale oo ay daabaceen qoraalo ka digaya cudurka oo loo qaybiyay bulshada. Waxa kale oo ay sameeyeen bandhigfaneedyo ka digaya cudurka kuwaas oo laga sii daayay TV-yada dalka iyo idaacadda.
Mashruucan oo ku sahabsanaa barashada tolliinka dharka waxa loogu talagalay xubnaha danyarta ah ee ururka Sooyaal ee Ceerigaabo. Mashruuca waxa fuliyay ururka SCBO (Sanag Community Based Organization) oo muddo dheer ka dhisnaa gobolka sanaag hawlo badana u qabta bulshada ku dhaqan gobolka. SCBO waxay soo iibiyeen 8 makiinadood oo qorshuhu ahaa in ay wax ku bartaan 32 qof oo ka kooban 16 dumar ah iyo 16 rag ah. Waxase ka faa´iidaystay oo wax ku bartay 24 dumar ah iyo 16 rag ah. Mashruuca waxa ku baxday lacag dhan 90 000 kr oo markaa u dhigmaysay11 000 $. Waxbarashadu waxay ka koobnayd laba teeram.
Sawiro laga soo qaaday xafladdii xidhitaanka teeramka koowaad ee mashruuca Sooyaal ee Ceerigaabo 2005-12-16
Sawiradan waxa laga soo qaaday mashruuca Sooyaal ee Ceerigaabo oo bishii afraad ee sannadkan ka bilowday magaalomadaxda gobolka Sanaag.
Mashruucu wuxu ku sahabsan tahay barashada tolliinka dharka oo ay ka faa´iidaysan doonaan xubnaha ururka Sooyaal ee Ceerigaabo. Waxbarashadu waxay ka kooban tahay laba teeram oo teeramkiiba ay ka baxayaan ugu yaraan 16 qof oo ka kooban 8 dumar ah 8 rag ah. Sawirada waxa laga soo qaaday xafladdii xidhitaanka teeramka koowaad, waxana qallinjabiyay 12 dumar ah iyo 8 rag ah. Mashruuca waxa gacanta ku haya ururka SCBO (Sanaag Community Based Organization) oo muddo dheer ka dhisnaa gobolka sanaag hawlo badana u qabta bulshada ku dhaqan gobolka.
Sawirada ardayda ka sokow waxa ka muuqda sawirka guddoomiyaha ururka SCBO Xasan Ibraahim (Xasan Bulsho), waana sawirka labaad ee safka hoose marka bidix laga soo bilaabo. Waxa kale oo ka muuqda sawirka saddexaad ee safka hoose marka bidix laga soo bilaabo, maayarka magaalada Ceerigaabo oo qaybinaya hadyado ay ka mid yihiin dharkii ay tolleen ardaydu oo iyaga la siiyay.
Dhakhtarka xanuunada maskaxda ee Berbera
Mashruucani wuxu ku sahabsanaa dhakhtarka xanuunada maskaxda ee Berbera, waxa ku baxday lacag dhan 112 000 kr oo markaa u dhigmaysay 14 000 $.. Mashruucu wuxu ka koobnaa furaashyo, go´yaal, barkimooyin iwm oo loo iibiyay dadka ku jira dhakhtarka iyo kharashka nadaafadda dhakhtarka muddo sannad ah, sida mushaharka shaqaalaha iyo kharashka ku baxa qalabka nadaafadda. Waxa mashruuca fuliyay ururka GAVO (General Assistance and Volunteers Organization) oo muddo dheer gacanta ku yahay hawlaha dhakhtarka, hawlo badan oo kalena u qabta bulshada ku dhaqan gobolka.